विस्तारै फैलिँदै ‘डेल्टाक्रोन’ : अमेरिका र बेलायतपछि अष्ट्रेलिया पुग्यो, कति खतरनाक? – Health Post Nepal
विस्तारै फैलिँदै ‘डेल्टाक्रोन’ : अमेरिका र बेलायतपछि अष्ट्रेलिया पुग्यो, कति खतरनाक?
२०७८ फागुन ५ गते १३:०६
काठमाडौं – कोरोना भाइरसले समय-समयमा आफ्नो रूप परिवर्तन गर्दै विश्वमा एक चुनौतीका रुपमा देखा परिरहेको छ। दोस्रो लहरमा डेल्टाले नेपालसहित विश्वलाई निकै प्रभावित बनायो। डेल्टापछि आएको ओमिक्रोन अत्याधिक संक्रामक भएपनि खासै मानवीय क्षति भने भएन। तेस्रो लहरको कारण ओमिक्रोन भेरियन्ट बन्यो। जुन धेरै छिटो फैलिए पनि डेल्टाभन्दा कम खतरनाक छ।
वैज्ञानिकहरूले यसबीच कोरोनाको अर्को भेरियन्ट आए निकै खतरनाक हुने बताउँदै आएका छन्। डब्लुएचओले अब ओमिक्रोनभन्दा छिटो फैलिने नयाँ भेरियन्ट आउन सक्ने पनि बताएको छ। यस चेतावनीका बीच बेलायतबाट नयाँ भेरियन्ट आएको छ। डेल्टा र ओमिक्रोनको संयोजनबाट बनेको ‘डेल्टाक्रोन’ भेरियन्टलाई पहिले ल्याबको त्रुटि मानिएको थियो तर यो अहिले विभिन्न देशमा विस्तारै देखा पर्दै गएको छ।
यसैबीच, बेलायत र अमेरिकापछि अष्ट्रेलियामा ‘डेल्टाक्रोन’ पत्ता लागेको छ। डेल्टाक्रोन कोरोना भाइरसको म्यूटेन्ट हो र यसले कोरोना भाइरसको डेल्टा र ओमिक्रोन भेरियन्टका लक्षणहरू देखाउँदै आएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो डेल्टा भेरियन्ट र ओमिक्रोन भेरियन्ट दुवैबाट संक्रमित बिरामीबाट उत्पत्ति भएको हो। यद्यपि, यो कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो भन्ने अझै पुष्टि भएको छैन। तर, डेल्टाक्रोनको पहिलो केस बेलायतमा पुष्टि भएको थियो। बेलायतपछि अमेरिकामा डेल्टाक्रोनका २ वटा केस फेला परेका छन् भने अष्ट्रेलियामा पनि देखिएको छ।
कति संक्रामक वा खतरनाक छ डेल्टाक्रोन?
यो म्यूटेन्ट कति संक्रामक वा गम्भीर छ भन्ने बारे अझै थाहा नभएको बेलायतका स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। यसका साथै यस म्यूटेन्टविरुद्ध खोपहरू कत्तिको प्रभावकारी साबित हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि अहिल्यै केही भन्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन्।
बेलायतका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यस भेरियन्टलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताएका छन्। जुन व्यक्तिमा एकै समयमा डेल्टा र ओमिक्रोन भेरियन्ट पाइएको थियो उसको उमेर कति थियो, कहिले संक्रमण भयो र अहिले अवस्था कस्तो छ? लगायतका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। त्यसैले यो कति संक्रामक र खतरनाक छ भन्ने तथ्य बुझ्न केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
तर, एउटा राम्रो खबर यो छ कि इस्ट एङ्गलिया विश्वविद्यालयका संक्रामक रोग विशेषज्ञ पल हन्टरले डेल्टाक्रोन त्यति खतरनाक सावित हुननसक्ने बतचाएका छन्। धेरै मानिसहरूले खोप लगाइसकेका कारण उनीहरुमा कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढिसकेको उनले बताएका छन्।